ဆာလာပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ လိုက်ဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ဖာဘင်ဟို - Shwe Soccer
ဆာလာပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ လိုက်ဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ဖာဘင်ဟို
လီဗာပူးလ်ရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှုး မိုဆာလာ ကိုခေါ်ယူချင်တဲ့ အသင်းများစွာရှိနေသလို လက်ရှိမှာစာချုပ်သစ် ချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်လို့ စိတ်ပူနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။လီဗာပူးလ်ဟာ ဆာလာနေရာအတွက်ဂျိုတာ ကို အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် မိုဆာလာ လို ခြေစွမ်းမြင့်မားစွာ အသင်းကို တွန်းတင်ပေးနိုင်ပါ့မလား‌ဆိုတဲ့ မယုံကြည်ခြင်းတွေကရှိနေပါသေးတယ်။ ဆာလာကို ရီးရဲလ်က အတော်လေးအလိုရှိနေကာ သူတို့ရဲ့ညာခြမ်းအတွက်အဖြေလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့် အသင်းဖော် ဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်လူ ဖာဘင်ဟိုကဝောာ့ အန်ဖီးလ်မှာပျော်ရွှင်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
LIVERPOOL, ENGLAND – SEPTEMBER 12: Fabinho of Liverpool reacts during the Premier League match between Liverpool and Leeds United at Anfield on September 12, 2020 in Liverpool, England. (Photo by Phil Noble – Pool/Getty Images)
ဆာလာ အနေနဲ့လာမယ့်တစ်ရာသီဆိုရင်စာချုပ်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့ လီဗာပူးလ်ဖက်ကတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေသော်လည်း လက်ရှိအထိအဆင်မချောသေးပါဘူး။ဖာဘင်ဟိုက”နာမည်ကြီးကစားသမားတိုင်းက ကောလဟာလတွေတိုင်းမှာပါဝင်နေတတ်တာပါပဲ။ဆာလာ က လီဗာပူးလ်မှာကစားနေတာပါ။ဒါကကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးအသင်းတွေထဲကတစ်င်းမဟုတ်လား။သူ့နာမည်ကိုအခြားအသင်းတွေ အထူးသဖြင့် မတူညီတဲ့လိဂ်က အသင်းတွေနဲ့သတင်းထွက်တာကမထူးဆန်းဘူးလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။ကျနော့်အမြင်မှာတော့ သူက တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေသလို ပုံစံကောင်းလည်းရနေတာပဲလေ။သူက အမြဲတမ်းတောင်းဆိုမှု့မြင့်မားတဲ့သူပါ။
သူကအမြဲတမါးလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်နေသလို အသင်းအတွက်လညမကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေသာပြုလုပ်ပေးသူပါ။ပြီးတော့သူကတကယ်လည်းအလုပ်ကြိုးစားသူပါပဲ၊ ဒီလိုသတင်းတွေထွက်လာတိုင်းလည်း လက်ရှိအခြေအနေတွေကနေဘာမှကွဲပြားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကဂိုးတွေသွင်းယူနေတာပဲမဟုတ်လား ဒါကိုလူတွေမြင်ဖို့လိုပါတယ်။အဝတ်လဲခန်းမှာဆိုရင်လည်းသူကအမြဲတမ်း ဟာသတွေပြောနေပြီး အားလုံးကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေသူပါ။သူ့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုထိခိုက်မယ့်အရာရှိတယ်လို့တော့ကျနော်မထင်ပါဘူး။ခြုံပြောရရင် ဒီလိုအခြေအမြစ်မရှိတဲ့သတင်းတွေနောက် ကျနော်ကလိုက်လေ့မရှိလို့ သေချာတော့မသိတာအမှန်ပါပဲ”
“ကျနော်ပြောခဲ့သလို ကစားသမားကောင်းဆိုတာ အမြဲတမ်းအသင်းကြီးတွေနဲ့အသံထွက်နေမှာပဲလေ”လို့ဆိုပါတယ်။ဆာလာ ရဲ့ စာချုပ်က တစ်ပတ်ကိုပေါင်နှစ်သိန်းတန်ကြေးရှ်ပြီး ယခု (၁၂) လအတွင်းမဆွေးနွေးနိုင်ရင် ဇန်နဝါရီမှာဆာလာ အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းဖို့ရွေးချယ်နိုင်နေပါပြီ။အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် ပီဂျစ်ကစားသမကပိုက်ဆံမက်မောသူမဟုတ်လို့သူ့အတွက် လစာပြသနာမရှိပေမယ့် အဓိကပြနသနာက ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုသဆဘာကျနေတဲ့ကလောပ့်က လီဗာပူးလ်ကနေထွက်ခွာသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပြီး (၃၀) ဝန်းကျင်မှာ အန်ဖီးလ်ရဲ့ဘော့စ်အသစ် နဲ့ အဆင်မချောမှာ မူဝါဒ နဲ့မကိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေဟန်ရှိပါတယ်။
လီဗာပူးလ္ရဲ့ အဓိက တိုက္စစ္မႈး မိုဆာလာ ကိုေခၚယူခ်င္တဲ့ အသင္းမ်ားစြာရွိေနသလို လက္ရွိမွာစာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္လို႔ စိတ္ပူေနသူေတြလည္းရွိပါတယ္။လီဗာပူးလ္ဟာ ဆာလာေနရာအတြက္ဂ်ိဳတာ ကို အစားထိုးဖို႔စီစဥ္ထားေပမယ့္ မိုဆာလာ လို ေျခစြမ္းျမင့္မားစြာ အသင္းကို တြန္းတင္ေပးနိုင္ပါ့မလား‌ဆိုတဲ့ မယုံၾကည္ျခင္းေတြကရွိေနပါေသးတယ္။ ဆာလာကို ရီးရဲလ္က အေတာ္ေလးအလိုရွိေနကာ သူတို႔ရဲ့ညာျခမ္းအတြက္အေျဖလို႔သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ အသင္းေဖာ္ ဘရာဇီးလ္ကြင္းလယ္လူ ဖာဘင္ဟိုကေဝာာ့ အန္ဖီးလ္မွာေပ်ာ္ရႊင္ေနေသးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဆာလာ အေနနဲ႔လာမယ့္တစ္ရာသီဆိုရင္စာခ်ဳပ္ကုန္ဆုံးေတာ့မွာျဖစ္လို႔ လီဗာပူးလ္ဖက္ကတိုးျမႇင့္ဖို႔ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း လက္ရွိအထိအဆင္မေခ်ာေသးပါဘူး။ဖာဘင္ဟိုက”နာမည္ႀကီးကစားသမားတိုင္းက ေကာလဟာလေတြတိုင္းမွာပါဝင္ေနတတ္တာပါပဲ။ဆာလာ က လီဗာပူးလ္မွာကစားေနတာပါ။ဒါကကမၻာ့အႀကီးက်ယ္ဆုံးအသင္းေတြထဲကတစ္င္းမဟုတ္လား။သူ႔နာမည္ကိုအျခားအသင္းေတြ အထူးသျဖင့္ မတူညီတဲ့လိဂ္က အသင္းေတြနဲ႔သတင္းထြက္တာကမထူးဆန္းဘူးလို႔က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ သူက တကယ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေနသလို ပုံစံေကာင္းလည္းရေနတာပဲေလ။သူက အျမဲတမ္းေတာင္းဆိုမႈ႔ျမင့္မားတဲ့သူပါ။
သူကအျမဲတမါးလည္းအေကာင္းဆုံးျဖစ္ခ်င္ေနသလို အသင္းအတြက္လညမေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစမယ့္အရာေတြသာျပဳလုပ္ေပးသူပါ။ၿပီးေတာ့သူကတကယ္လည္းအလုပ္ႀကိဳးစားသူပါပဲ၊ ဒီလိုသတင္းေတြထြက္လာတိုင္းလည္း လက္ရွိအေျခအေနေတြကေနဘာမွကြဲျပားသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။သူကဂိုးေတြသြင္းယူေနတာပဲမဟုတ္လား ဒါကိုလူေတြျမင္ဖို႔လိုပါတယ္။အဝတ္လဲခန္းမွာဆိုရင္လည္းသူကအျမဲတမ္း ဟာသေတြေျပာေနၿပီး အားလုံးကိုရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစသူပါ။သူ႔အတြက္တစ္စုံတစ္ခုထိခိုက္မယ့္အရာရွိတယ္လို႔ေတာ့က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။ျခဳံေျပာရရင္ ဒီလိုအေျခအျမစ္မရွိတဲ့သတင္းေတြေနာက္ က်ေနာ္ကလိုက္ေလ့မရွိလို႔ ေသခ်ာေတာ့မသိတာအမွန္ပါပဲ”
“က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလို ကစားသမားေကာင္းဆိုတာ အျမဲတမ္းအသင္းႀကီးေတြနဲ႔အသံထြက္ေနမွာပဲေလ”လို႔ဆိုပါတယ္။ဆာလာ ရဲ့ စာခ်ဳပ္က တစ္ပတ္ကိုေပါင္ႏွစ္သိန္းတန္ေၾကးရွ္ၿပီး ယခု (၁၂) လအတြင္းမေဆြးေႏြးနိုင္ရင္ ဇန္နဝါရီမွာဆာလာ အေနနဲ႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအသင္းကိုအလြတ္ေျပာင္းဖို႔ေရြးခ်ယ္နိုင္ေနပါၿပီ။အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ပီဂ်စ္ကစားသမကပိုက္ဆံမက္ေမာသူမဟုတ္လို႔သူ႔အတြက္ လစာျပသနာမရွိေပမယ့္ အဓိကျပနသနာက ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလားကိုသဆဘာက်ေနတဲ့ကေလာပ့္က လီဗာပူးလ္ကေနထြက္ခြာသြားမွာကိုစိုးရိမ္ေနၿပီး (၃၀) ဝန္းက်င္မွာ အန္ဖီးလ္ရဲ့ေဘာ့စ္အသစ္ နဲ႔ အဆင္မေခ်ာမွာ မူဝါဒ နဲ႔မကိုက္မွာကိုစိုးရိမ္ေနဟန္ရွိပါတယ္။
ဂေါင်းကြီးနဲ့လင်ဒီလော့ဖ်တို့ထက် သာလွန်နေတဲ့ ဒီယက်စ်နဲ့စတုန်းစ်တို့အတွဲ
ရောက်တာနဲ့ အိတ်ဘေးချပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းတန်းပြေးခဲ့ရတဲ့ တူချယ်လ်
မန်စီးတီးအတွက် ကော်စတာက ဖလားယူပေးနိုင်မယ်လို့ မီကာရစ်ချတ်ဟောကိန်းထုတ်
Previous Article လမ်းပတ်နေရာအစားထိုးဖို့ နည်းပြနှစ်ဦးကို ကြိုတင်ရှာဖွေထားတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
Next Article ဇယားထိပ်ရောက်ရှိဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ ဘယ်လောက်စောင့်ခဲ့ရလဲ?
မန်စီးတီး အသင်းကတော့ ဒီမနက်က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဝက်စ်ဘရွမ်း အသင်းကို (၅)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရပြီး အနိုင် (၃)မှတ်၊ ဂိုးမပေးရအောင်စွမ်းဆောင်မှုတွေအပါအဝင် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးနေရာကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီး အသင်းဟာ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ တိုက်စစ်ပိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သလို အထူးချီးကျုးရမှာက ရူဘင်ဒီယက်စ် နဲ့ ဂျွန်စတုန်းစ် တို့ရဲ့ဗဟိုခံစစ်အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီး အသင်းနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ဟာ ရာသီအစထဲက အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်း ပိုမိုအားကောင်းလာဖို့ …
လမ်းပတ်အတွက် ပထမဆုံးအသံထွက်လာတဲ့ ကစားသမားက ဘယ်သူလဲ?
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးခံစစ်မှုးဖြစ်လာမယ့်သူအစား လင်ဒီလော့ဖ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ ယူနိုက်တက်
မင်းကြိုက်ရင်ငါတို့ဆီလာဆိုပြီး ရာမို့စ်ကို ငွေထုပ်ပစ်ချပေးနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်ရာမိုစ့်အတွက် ညီမျှ တဲ့အဖြေတစ်ခုမရှာနိင်သေးချိန်မှာပဲ ပီအက်စ်ဂျီကတော့ ကြားဖြတ်ဝင်ယူဖို့ကြံစည်နေပါတယ်။ပီးရက်ဇ် နဲ့ရာမိုစ့်ကြားမှာ မကြေလည်တဲ့ရန်ပွဲ ဖြစ်နေလို့စာချုပ်သစ် အတွက်ရှေ့မဆက်နိုင်ချေဖြစ်နေလို့ ဒီတစ်ကြိမ် ပဲရစ် ဖက်ကလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှု့ကို ရာမိုစ့်တစ်ယောက်ပယ်ချဖို့ကခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ရာမိုစ့်အနေနဲ့လည်း ရီးရဲလ်မှာ ကာလရှည်ကစားခဲ့ပြီး ငယ်မွေးခြံပေါက်ဖြစ်တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ဘဝကို မက်ဒရစ်မှာ မြှပ်နှံထားလို့လည်း ပဲရစ်ကိုသွားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းက ခြေသ့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ လူကို လှုပ်ခါစေမှာတော့အသေချာပါပဲ။ရာမိုစ့်ဖက်ကလည်း ရီးရဲလ်ကို သုံးနှစ်တိုးစေချင်နေပြီး ရီးရဲလ်ကတော့ ဇီဒန်း …
နောက်တစ်ယောက်သာရှာလိုက်တော့လို့ ရီးရဲလ်ကို ပြောလိုက်တဲ့ ဘတ်ပေး
လီဗာပူးလ်၊ အေဂျက်ဇ်နဲ့ ဘော်ဒိုးတို့ကို အကြွေးဆပ်ရဖို့ရှိနေတဲ့ ဘာကာ
ရော်နယ်ဒို နောက်ပိုင်း လာလီဂါ အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုရရှိခဲ့တဲ့ ဆွာရက်စ်
ဆွာရက်ဇ်ကြောင့် နောင်တတွေပိုက်ရဦးမယ့် လီဗာပူးလ်နဲ့ ဘာကာ
မီလန်ဒါဘီမှာ ဇလာတန်ကိုပစ်သတ်မယ်ဆိုတဲ့အထိ ပွဲကြမ်းခဲ့တဲ့ လူကာကူ
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါအီတလီယာဖလားကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲမှာတော့ အင်တာမီလန်က အေစီမီလန်ကို အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂-၁ နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မီလန်ဒါဘီဖြစ်တာနဲ့အညီ ပွဲက တော်တော်လေးကြမ်းခဲ့ပြီး အင်တာတိုက်စစ်မှူးလူကာကူနဲ့ အေစီတိုက်စစ်မှူးဇလာတန်တို့ရဲ့ ရန်ပွဲကြောင့် အရှိန်ပိုတက်ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးနှစ်ဦးဟာ ကွင်းအတွင်းမှာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ကာ အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေ၊ ဥမင်အတွင်း ရန်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ပွဲစည်ခဲ့ပါတယ်။ ဇလာတန်က အေစီအတွက် အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပေမယ့် လူကာကူက ပြန်လည်ချေပခဲ့ပြီး ပွဲပြီးခါနီးမှာ အဲရစ်ဆန်က …
အာဆင်နယ်ထက် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ပိုသေချာနေတဲ့ လက်စတာကို အဲရစ်ဆန် ပိုစိတ်ဝင်စား
ဆောင်းရာသီချန်ပီယံ က ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ အသင်းသားတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဇလာတန်
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမား ပထမဆုံးသွင်းဂိုး